चीन बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउच निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Rijing Techtronic
घर > उत्पादनहरू > लचिलो प्याकेजिङ्ग > स्ट्यान्ड अप पाउच > बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू
बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू (SUP) बच्चाहरूलाई सफलतापूर्वक प्याकेज खोल्ने र सम्भावित हानिकारक वा खतरनाक उत्पादनहरू निजाउने जोखिम कम गर्न डिजाइन गरिएको हो। यी झोलाहरूले सुरक्षित र सुविधाजनक पाउच पुन: प्राप्तिको लागि बाल-प्रतिरोधी जिपर प्रयोग गर्छन्। बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू प्रभावकारी र किफायती दुवै छन्। नि: शुल्क नमूनाको लागि सोधपुछ पठाउन न्यानो स्वागत छ, हामीसँग स्टकमा बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू छन्।
बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू आदर्श हुन्छन् जब बाल प्रतिरोधी प्याकेजिङ आवश्यक हुन्छ। तिनीहरू उच्च गुणस्तरका छन्, प्रमाणित बाल प्रतिरोधी झोलाहरू धातुकृत, गन्ध प्रूफ सामग्रीबाट बनेका छन् र आश्चर्यजनक रूपमा सस्तो छन्। हाम्रो पेटेन्ट, अभिनव जिपर डिजाइनले यी पाउचहरूलाई बाल खोल्ने विरुद्ध बलियो बनाउँछ, तर वयस्कहरूको लागि सजिलो। भित्री ओठमा छापिएको तीरले कसरी खोल्ने भनेर देखाउँछ।
बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू प्रभावकारी र किफायती दुवै छ!
बाल प्रतिरोधी जिपर विभिन्न जिपर ढाँचाहरूमा थिच्ने जिपरहरू खडा गर्न जिपर निकास झोलाहरू बन्द गर्न प्रेसदेखि लिएर आउँछ। प्याकेज खोल्नको लागि सबै शैलीहरूलाई दुई-हातको निपुणता चाहिन्छ। वयस्कहरूलाई सामग्री खोल्न र पहुँच गर्न कुनै समस्या छैन, तर बच्चाहरूलाई त्यसो गर्न धेरै गाह्रो छ।
हाम्रा सबै बाल प्रतिरोधी पाउचहरू गन्ध प्रमाण हुन् र अपारदर्शी हुनको लागि डिजाइन गरिएको छ, सामग्रीहरूलाई दृश्यबाट लुकाएर राखिएको छ, धेरै राज्यका कानूनहरूले आवश्यकता अनुसार। तपाईंको उद्योग वा उत्पादन जेसुकै भए पनि, हामीसँग तपाईंको लागि सही बाल प्रमाण प्याकेजिङ छ।
3. बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउच सुविधा र अनुप्रयोग
· कम सामग्री = स्रोत कटौती र लागत बचत
· राम्रो खोल्ने क्षेत्र; पुन: बन्द गर्न सजिलो (स्यान्डविच झोला जस्तै सरल)
· लेबल तयार, बाल प्रतिरोधी र छेडछाड स्पष्ट
· न्यूनतम अर्डर मात्रामा उपलब्ध - १०० झोलाबाट सुरु
राज्य नियमहरूको लागि आदर्श: अपारदर्शी, बाल प्रतिरोधी, छेडछाड स्पष्ट
· खानाको लागि सुरक्षित: FDA-अनुमोदित सामग्रीबाट बनेको
· गन्ध-प्रूफ: गन्धमा सिलहरू र सामग्रीलाई ताजा राख्छ
· भ्याकुम सील योग्य
बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरूको लागि सामान्यतया प्रयोग हुने बजारहरू
· प्रिस्क्रिप्शन र ओभर-द-काउन्टर औषधिहरू
· भिटामिन र पोषण पूरक
· सौन्दर्य र कस्मेटिक उत्पादनहरू
4. बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउच विवरणहरू
जिपरलाई बीचको बिन्दुमा उल्टो छेउमा तान्न तपाईंले दुबै हातहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी मात्रै तपाईंले झोला खोल्न सक्नुहुन्छ।
5.बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउच योग्यता
6. बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरूको डेलिभरी, ढुवानी र सेवा
३) हवाई द्वारा (5-7 दिन), एयरपोर्ट देखि एयरपोर्ट सम्म।
म बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरूको अर्डर मात्रा अनुसार 20 - 40 दिन लिन्छु
हामीसँग BRC, HACCP, SGS र ISO छ। र हामीसँग यी वातावरणीय बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरूको लागि पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने र कम्पोस्टेबल प्रमाणपत्रहरू छन्।
हाम्रा उत्पादनहरूमा स्ट्यान्ड अप पाउच, गसेट ब्याग, फ्ल्याट बटम पाउचहरू, २/३ साइड सिल ब्याग, स्पाउट पाउच र रोल स्टक फिल्म, आदि समावेश छन्। र हामीसँग पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने र कम्पोष्ट गर्न मिल्ने बाल प्रतिरोधी जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू उत्पादन गर्ने प्रशस्त अनुभव छ।